ဖြည့်စွက်စာတွေဖြစ်တဲ့ MultiVitamin တို့ mineral တို့ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိမရှိ ငြင်းခုံနေကြတာ ဆယ်စုနှစ်များစွာရှိပါပြီ။ အများစုက များများသောက် မြန်မြန်ကျန်းမာ ဆိုတာကို ယုံကြတဲ့ အတွက် ဖြည့်စွက်စာ ဈေးကွက်ကကလည်း အရှိန်နဲ့ အဟုန်နဲ့ကို နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ ထွက်လာကြတာ မျက်မြင်ပါပဲ။
Zinc ဓာတ်က ဖျားတာကိုသက်သာစေတယ်။ Vitamin D က အရိုးအတွက်ကောင်းစေတယ်။ Vitamin B အုပ်စုက စိတ်ဓာတ်ကျ၊ စိတ်ဓာတ်အားငယ်တာကို ပြေပျောက်စေပါတယ်။ စသဖြင့် ကြော်ငြာအား ကောင်းကောင်းကြောင့် တစ်ပိုင်း၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက သူတို့လည်း “ဒါသောက်တယ် လိုက်သောက်” ဖို့ ဆွယ်တာက တစ်ကြောင်း Vitamin တွေ၊ mineral တွေကို လိုက်သောက်ဖြစ်ကြတာတွေရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ ဖြည့်စွက်စာတွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အယူအဆ အလွဲတွေ ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ အမြှစ်တွယ်နေတာကြာပါပြီ။
ဒီအယူအဆလွဲတွေနဲ့ပက်သက်တဲ့ ၈ ချက်ကို ရှင်းပြပါမယ်။
၁. ဖြည့်စွက်စာတွေ နဲ့ အစာမစားတဲ့ အာဟာရကို ဖြည့်စွက်လို့ရတယ်။ ရောဂါတွေကို ကာကွယ်လို့ရတယ်။
တကယ်တော့ အစားအသောက်ကနေတဆင့် ရတဲ့ အာဟာရ သာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဖြည့်စွက်စာကနေ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေကို မရပါဘူး။ အစားအသောက်ကနေ သဘာဝက အသင့်ထုပ်ပိုးပြီးသား vitamin နဲ့ mineral ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အထောက်အကူပေးပါတယ် ။ ဖြည့်စွက်အာဟာရဆေးလုံး၊ ဆေးတောင့်တွေဟာ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အာဟာရတွေကို ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ဖို့ပါ။ အစားထိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
၂. ဖြည့်စွက်စာတွေဟာ “သဘာဝ”မို့ ဘေးကင်းတယ်။
ဖြည့်စွက်စာတွေဟာ “သဘာဝ”က လာပေမယ့် လူတွေက ဆေးလုံးဆေးတောင့်တွေလုပ်လိုက်တော့ “သဘာဝ” မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး “သဘာဝ” ဆိုတိုင်း ဘေးကင်းတယ်၊ စိတ်ချရတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ “တန်ဆေး၊ လွန်ဘေး” ဆိုရိုးအရ သာမန်ထက်လွန်တဲ့ ပမာဏရောက်ရင် မကောင်းပါဘူး။
၃. ဖြည့်စွက်စာတွေက များများသောက်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး။
Vitamin တို့ mineral တို့ ဖြည့်စွက်စာတွေကို လူ့ခန္ဓာကိုယ် လိုအပ်ချက်အလျောက်ပဲ သောက်သုံး သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ လိုတာထက်များရင် အတွင်းအင်္ဂါ ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Vitamin A ဓာတ်များတဲ့အခါ အသည်း ကိုထိခိုက်တတ် ပါတယ်၊ နောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေမှာဆို ပုံမမှန်တဲ့ကလေး မွေးတတ်ပါတယ်။ Vitamin B6 များခြင်းက အာရုံကြောထိခိုက်စေပြီး၊ Vitamin C များရင် Vitamin C ရဲ့ anti-oxidant ကနေ pro-oxydantပြောင်းပြီး ဝမ်းလျောစေတတ်ပါတယ်။
၄. ဖြည့်စွက်စာတွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စစ်ဆေးကြတယ်။
တကယ်တော့ ဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ တချို့သော ဖြည့်စွက်စာတွေဟာ စစ်ဆေးထောက်ခံချက်တောင် မရှိပါဘူး။ အစားအသောက်နဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတဲ့ဌာနမှာလည်း လူအင်အားအခက်အခဲတွေရှိလို့ ဖြည့်စွက်စာတွေဆို စစ်ဆေးမှု မတင်းကျပ်ပါဘူး။
ဈေးကွက်ပေါ်ကို ဖြည့်စွက်စာတွေရောက်ပြီး တစ်ခုခု အဆင်မပြေရင် အခြား စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ စားသုံးသူရေးရာ အဖွဲ့တို့လို့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို တိုင်ကြားလို့ရပါတယ်။
တချို့ကျတော့လည်း ဖြည့်စွက်စာတွေ လုံးဝ မလိုအပ်ဘူး တွေးပြန်တယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ လိုအပ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုဆို ဖြည့်စွက်စာတွေက အကျိုးပြုပါတယ်။
အစားအသောက်ကန့်သတ်ထားရတဲ့လူနာတွေဆို Vitamin နဲ့ mineral က အကျိုးပြုပါတယ်။
နို့နဲ့ မတည့်တဲ့သူတွေကို calcium နဲ့ Vitamin D သောက်သုံးခြင်းက အကျိုးရှိပါတယ်။
သားသတ်လွတ်စားတဲ့သူတွေမှာ Vitamin B12 ချို့တဲ့တတ် တာကြောင့် Vitamin B12 သောက်သုံးရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဆို Folic acid သောက်သုံးပေးရပါတယ်။
၆. ဖြည့်စွက်စာတွေက ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓာတ်ပြုတာမရှိဘူး။
တချို့ ဖြည့်စွက်စာတွေဖြစ်တဲ့ Vitamin K, Zinc, Omega-3 စတာတွေက ဆေးဝါးအချို့နဲ့ ဓာတ်ပြု တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Aspirin သောက်နေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပိုးသတ်ဆေး တစ်ခုခု သောက်နေမယ်ဆို ဖြည့်စွက်စာတွေက ဆေးဝါးတွေရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့စေတာ တိုးစေတာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ပြတဲ့အခါ မိမိ အမြဲသောက်နေကျဆေးတွေကို ပြောပြပြီး ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
၇. ဖြည့်စွက်စာတွေကို အစားအသောက် မစားထားဘဲ သောက်သင့်တယ်။
ဖြည့်စွက်စာအများစု ကတော့ ရေမှာပျော်ဝင်တဲ့အတွက် အစာမရှိဘဲ သောက်လို့ရပေမယ့် အဆီမှာပဲပျော်ဝင်တဲ့ vitamin တွေဖြစ်တဲ့ Vitamin A,D, E,နဲ့ K တို့ကတော့ အစာမရှိတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က မစုပ်ယူနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဖြည့်စွက်စာဆေးလုံး၊ ဆေးတောင့်တွေ သောက်တဲ့အခါ အစာနည်းနည်းစားပြီးမှ သောက်သင့်ပါတယ်။ အစာမစားဘဲ ဖြည့်စွက်စာ ဆေးလုံးဆေးတောင့်တွေ သောက်တဲ့အခါ တခါတရံလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၈. ဖြည့်စွက်စာတွေ တူတူသောက်တာ ကောင်းတယ်။
ဖြည့်စွက်စာ အချို့က အခြင်းခြင်း ပိုကောင်းတဲ့ အခြေအနေကို ရစေတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။
ဥပမာ – Vitamin C က ခန္ဓာကိုယ်ကို Iron (သံဓာတ်) စုပ်ယူမှု အားကောင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကျတော့ ဆန့်ကျင့်ဘက်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်။
ဥပမာ – Calcium ဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Iron စုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Zinc ဓာတ်က copper ဓာတ်စုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြည့်စွက်စာတစ်ခုတည်းကို အများကြီးသောက်တာက တခြား Vitamin ဒါမှမဟုတ် တခြား mineral တစ်ခုခု ကို လျော့နည်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကချိုံတဲ့တာမျိုးကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။